Shan sheey oo ugub ah oo Trump ku saabsan oo banaanka yimid |
Shan sheey oo ugub ah oo Trump ku saabsan oo banaanka yimid
Waxaa shaqadii iska casilay safiirkii Britain ee Maraykanka u fadhiyay kadib markii uu cadaadis badan kala kulmayt madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, kaas oo qoonsaday waraaqo warbaahinta loo dusiyay oo uu safiirka ku sheegay in Aqalka Cad uu yahay mid uu qalalaaso badan ka jiro.
Haddaba maxay banaanka soo dhigtay xil ka dagista Kim Darroch, muranka Trump aawadiis?
1. Ka talloowga Xuduudaha
Sida uu horey u sheegay ninka lagu magacaabo Forrest Gump, awoodda waa sida qofka haysto u adeegsado, sidaas darteed Madaxweyne Donald Trumo waxa uu dabeecad ka dhigtay in uu ka tallaabo wax allaale wixii dhaqanka dublamaasiyadda lagu yaqiinay in uu ahaa, wuxuuna degsaday shuruuc isaga u gaar ah.
Inkasta oo siyaasiyiinta mucaaradka ah ay markasta kasoo horjeedsadaan marka uu talaabo qaldan qaado iyo waliba marmar xubno ka tirsan xisbigiisa ay ka hadlaan, haddane madaxweynaha waxa uu u shaqeeya iyada oo aysan jirin cid hubisa isaga.
Hadda dhaqamadiisa caaddo-buriska ah waxa ay ka talaabeen badda Atlantikada, wuxuuna horseeday in safiirkii Britain ee Maraykanka Kim Darroch uu ku qasbay in uu xilka isaga dego, iyada oo xitaa dowladda Britain ay difaaci kari weysay.
2. Dhambaaladii sirta ee la dusiyay waxa ay damqiyeen dareenka Trump
“Xushmaddii loo hayay Maraykanka waa ay soo noqotay” ayaa ah hadalka ugu badan ee uu yiraahdo Donald Trump. Markii uu ku jiray tartankii doorashada 2016-kii, waxa uu sheegay in intii uu xilka hayay madaxweyne Barack Obama in uu hoos u dhacay maqaamkii Maraykanka ee adduunka, balse markii uu isaga xilka yimid taas ay wax badan iska badaleen.
Waxa uu aad u jecelyahay in uu ku faano sida madaxda kale ee adduunka ay u ammaanaan, u bogaadiyaan, islamarkaasna la dhacsanyihiin awoodda iyo barwaaqada Maraykanka haysto.
Dhibka hadda jira waxa uu yahay in mid ka mid safiiradda ugu sumcadda badan, uguna saamaynta badan ee Maraykanka fadhiyay , Kim Darroch uu Trump ku tilmaamay nin aan shaqada aan u qalmin, islamarkaasna Aqalka Cad ku tilmaamay meel qas iyo jiho wareer ka jiro. Hadalka danjiraha dalka saaxiibka ugu dhow ay yihiin Maraykanka ayaa ka dhigan in uu dhahayo ‘waakaas boqorkii, oo ay marada ka dhacday’.
Uma baahna in aad looga fikiro sida musharixiinta xisbiga Dimoqoraadiga ee 2010-ka ay erayadan safiirka ugu adeegsan doonaan Trump.
Sidaas darteed ayay u ahayd in safiirka sida ugu dhaqsiyaha badan meesha looga saaro, sumcadiisana loo dilo.
3. Warbaahinta Maraykanka oo liifadda gaabsatay
Warbaahinta dalka Ingiriiska sheekada ugu weyn ee ay hadal hayeen waxa ay ahayd tan muranka halka dhinac ahaa ee ka dhaxeeyay Trump iyo safiirka. Muranka ayaa sidoo kale ay ka hadlayeen madaxda dowladda iyo waliba siyaasiyiinta mucaaradka UK.
Hase yeeshee Maraykanka gudihiisa hadal haynta aad ayay u yareed, marka laga reebo in mararka qaar lasoo hadal qaadayay.
Madaxweynaha ayaa qorey 21 fariimood oo Twitter-ka ah muddo 2 maalmood gudahood ah tan iyo intii arrinta safiirka ay soo shaac baxday.
Markiiba waxa ay noqotay arrin laga gudbay, waxaana diirada la saaray arrimo kale.
Taas waxay keentay in Senator Lindsey Graham oo madaxweynaha aad ugu kacsan uu warbaahinta ku eedeeyay in ay liifada ka gaabsatay arrinta safiirka.
4. Tani waa sida uu Trump dadka u eryo
Dowladda Britain ayaa ugu dambeystii si rasmi ah u dhadhamisay sida Trump uu dadka uga eryo shaqooyinka iyo sida uu wax u maamulo.
Trump dadka toos uma eryo, balse waxa uu tusaa wax ay ku tagaan, tusaale haddii uu Trump doonayo in uu Kim tago, waxa uu awood u lahaa in uu saxiixo xeerka ‘Persona Non Grata’ oo ku xusan qodobka 9-aad ee Vienna ee dublamaasiyadda, taas oo UK ku qasbi lahayd in ay safiirka badesho.
Ma uusan samayn taas.
Taas badelkeed waxa uu safiirka ku weeraray qoraalo uu Twitter-ka soo dhigay, waxa uu sidoo kale kasoo xirtay albaabka Aqalka Cad, isaga oo sidoo kale shaqaalaha ka hor istaagay in ay la macaamilaan ninkan.
Horey ayuu sidan oo kale dad maamulkiisa uga tirsan u galay, kuwaas oo markii dambe ku qasbanaaday in ay shaqada iska casilaan.
5. Madmadoowga Trump iyo wasaaradda arrimaha dibed
Ma ahan arrin qarsoon xiriirka aan diiranayn ee ka dhaxeeya Trump iyo wasaaradda arrimaha dibedda Maraykanka.
Madaxweynaha ayaa la sheegay in uu wasaaradda u arko meel ay ka buuxaan dad isaga lid ku ah, maadaamaa wasaaradda ay wasiir ka ahayd Hillarry Clinton intii u dhaxaysay 2009-kii iyo 2013-kii, waxaana laga yaabaa in uusan taas ku qaldanayn.
Waxaase run ah oo kale in sida uu madaxweynaha u wajoho siyaasadda arrimaha dibedda ay aad uga duwantahay sida dublamaasiyiinta Maraykanka u barteen in loo wado hawlaha.
Arrintan waxa ay ku caddeyd shir jaraa’id oo ay qabatay afhayeenka Aqalka Cad Morgan Ortagus ayaa ku adkaysatay in xiriirka ka dhaxeeya Maraykanka iyo Britain uu yahay mid ka weyn shaqsi iyo waliba dowlad markaas xilka haysa.
Waxa ay sheegtay in aysan u hadli karin madaxweynaha , islamarkaasna aysan sharixi karin qoraaladiisa Twitter-ka.
La macaamilka madaxweyne wuxuu doono iska sameeyo, marka uu rabana hadla isaga oo aan wargalin ama aanan la tashan dadka waa arrin aad u adag, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibedda.
Waxa ay markasta qiyaasaan in madaxweynaha uu si lama filaan u badelo siyaasadda arrimaha dibeda, iyaga oo aanan qabin wax digniin ah.
Tani malaha waa sidii uu tilmaamay safiirkii UK Sir Kim Darroch emailadii uu u direy dowladiisa ee loo dusiyay warbaahinta UK. da